योगी आदित्यनाथले १५ वर्षको रेकर्ड तोड्दै 'रोजा इफ्तार पार्टी' नगर्ने :: Setopati
योगी आदित्यनाथले १५ वर्षको रेकर्ड तोड्दै 'रोजा इफ्तार पार्टी' नगर्ने
भारतको उत्तरप्रदेशका मुख्‍यमन्त्री योगी आदित्यनाथले मुख्यमन्त्री निवासमा 'रोजा इफ्तार पार्टी'को आयोजना नगर्ने भएका छन्। उत्तर प्रदेशमा १५ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक राज्यमा 'रोजा इफ्तार पार्टी' नहुने भएको हो।
उता राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) सँग सम्बद्ध राष्ट्रिय मुस्लिम मन्चले भने यो पार्टी आयोजना गर्ने भएको छ। मन्चसँग सम्बन्धित रईस खांले यसको जानकारी दिदैं पार्टीमा गाईको दूध बनेका खाना राखिने बताएका छन्। पार्टीमा मांसाहारी खाना भने बन्देज गरिनेछ।
अर्कोतर्फ, करिब १५ वर्षको रेकर्ड तोड्दै मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले आफ्नो सरकारी आवासमा रोजा इफ्तार पार्टी नगर्ने भएका हुन्।
तर, राज्यपाल नाइक, समाजवादी पार्टी (सपा) र काँग्रेसले भने विभिन्न मितिमा इफ्तार पार्टी दिने भएका छन्। इफ्तार भोज नदिनेमा भाजपाका तर्फबाट योगी आदित्यानाथ दोस्रा मुख्यमन्त्री हुन्। यसअघि रामप्रकाश गुप्ताले यो पार्टी गरेका थिएनन् तर राजनाथसिंह र कल्याण सिंहले रोजा पार्टी भोज गरेका थिए। मुलायमसिंह यादव, मायावती र अखिलेश यादवको पालामा यो पार्टी नियमित थियो।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ३१, २०७४, ०५:११:३०
बालबालिकालाई दिन लागिएको फाइजर खोप के हो? डा. शेरबहादुर पुन